Sheekada Satyameva Jayate: John musuq maasuqa sida uu ula dagaalayo inaba caadi ma ahan – Filimside.net
Sheekada Satyameva Jayate: John musuq maasuqa sida uu ula dagaalayo inaba caadi ma ahan
Murqaaniga Bollywood-ka John Abraham wuu soo laabtay wuxuuna la yimd filimka Satyameva Jayate oo 100% ka run sheegayo awooda xidigan u leeyahay inuu shaashada door adag ku matalo!
Jilaayaasha filimkan: John Abraham, Manoj Bajpayee, Aisha Sharma, Amruta Khanvilkar
Qiimeynta fariinta filimkan: 3/5 (Sedex xidig)
Muxuu ku wanaagsan filimka Satyameva Jayate: Hadalada la adeegsanayo gaar ahaan John hadaladiisa, bandhiga cajiibka badan ee John la yimid dhanka Action-ka iyo Manoj Bajpayee oo door liddi ku ah kan John si qurux badan u matalay.
Muxuu ku liitaa filimkan: Qaybta labaad filimkan fariimo kala duwan ayaa la isku dhex furaa taasi oo yara qaldeyso dhabaha uu fariin ahaan heestay, balse Action-kiisa wacan iyo hadaladiisa xarakaadka ah ayaa wax walbo ku hilmaan siinayaan.
Fariinta Filimka Satyameva Jayate Oo Kooban: Veer (John Abraham) waa sarkaal ciidamada booliska Mumbai ka tirsan waxayna dolwada u xil saareysaa inuu toogasho ku dilo kuwa musuq maasuqa xidideestay Mumbai ku hayaan isagana waa sarkaal aan ka laba labeyn qabashada hawsha loo diro.
Veer (John Abraham) qorshihiisa kowaad wuxuu yahay inuu dilo tuuga weyn Sadashiv Patil (Abhishek Khandekar) kadib marka uu gacanta ku dhigo wuu gubaa wuxuuna dambaskiisa keenaa saldhiga booliska!
Markale sarkaal Veer (John Abraham) wuxuu nolosha ku gubaa askariga lagu magacaabo Irrfan Qadri (Shaikh Sami Usman) wuxuuna gacanta ku dhigaa fal dambiyeed ku jiro laakiin maba yaqaan in qofka xabsiga la geeyo ee xeerkiisa wuxuu yahay inuu nolosha ku gubo!
Sarkaalka ciidamada Mumbai ugu sareeyo (Manish Chaudhary) ayaa kiiskan culus u xil saarayo sarkaal DCP Shivansh Rathod (Manoj Bajpayee) si uu usoo xaqiijiyo waxa rasmiga ah ee sababay Veer (John Abraham) inuu booliska xitaa toogto!
Dhinaca kale Veer (John) wuxuu sameesanaa nolol jaceyl asigoo ay is fahmayaan gabadha darawalka ka ah gaadiidka xeebta nadiifiyaan Shikha (Aisha Sharma).
Veer (John) waxay kulmayaan sarkaal Shivansh Rathod (Manoj Bajpayee) una sheegayo inuusan qof kale dili karin xitaa haddii uu fal dambiyeed cad ku helo.
Laakiin Veer (John) asigoo cadaadis adag kala kulmaayo sarkaal Shivansh Rathod (Manoj Bajpayee) ayuu haddana dilaa sarkaalka lagu magacaabo Damle (Ganesh Yadav) oo musuqu maasuqa caadeestay kana tirsanaa booliska xaafada Thane ee Mumbai.
Shivansh Rathod (Manoj Bajpayee) wuxuu ka yaabaa awooda uu Veer (John Abraham) u leeyahay qofka uu bartilmaameed ka dhigto inaan laga celin kari askari ama tuug qofkii uu doono ha ahaado.
Sidaa darteed Shivansh Rathod (Manoj Bajpayee) wuxuu ka shaqeenaa sidii uu ku ogaan lahaa talaabada xigta ee uu Veer (John Abraham) qaadayo.
Wuxuuna sarkaal Shivansh Rathod (Manoj Bajpayee) ogaanaa in Veer (John) talaabada xigta uu qaadi rabo tahay inuu ka taqaluso askariga Bhonsle (Rajesh Khera) ee xaafada Yerdi kana tirsan Mumbai maamulo kaasi oo ku caan baxay isagana musuq maasuqa.
Haddaba Shivansh Rathod (Manoj Bajpayee) wuxuu dabin iyo qorshe adag u dhigaa Veer (John Abraham) sidii uu kaga hortagi lahaa askariga xiga ee uu rabo inuu dilo!
Waxaana qaybaha xiga filimkan loo daawan doonaa dagaalka fool foolka ah ee dhex mari doono Veer (John) iyo Shivansh Rathod (Manoj Bajpayee) iyo sida Veer looga celin karo bartilmaameedkiisa.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimkan: Director Milap Milan Zaver fariin sahlan oo qof walbo fahmi karo ayuu doortay, haddalo wacan iyo Action heer sare ah ayuu ku kabay halka xifaaltan iyo xeelad u sameeyay labada hogaamiye filimkan ku tartamayaan John iyo Manoj.
Balse Director Milap Milan Zaver nuxur kale uma yeelin filimkiisa oo aan ahayn in askarta musuq maasuqa caadeesatay laga taqaluso xoogaa waxaa yara fiicneyd fariintiisa inuu balaarayo oo uu musuqa guud Hindiya ka hadlo.
Xoogaa uultimada ama dhamaadka filimkan ayaa lagu jah wareerayaa balse sida guud Action-ka, xarakaadka iyo heesaha wacan uu leeyahay filimkan ayaa ku xiiso galin doono.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkan: John wuxuu la yimid qaab jiliin cajiib badan maba ahan John-kii sanadkan sameeyay filimka Parmanu ee maskiinka ahaa kaliya xeelada adeegsanayay balse filimkan waxaa ku daawan doontaa John awood badan xarakeenayo hadalo kul kulul ku hadlaayo Action-kiisana aad u sareeyo.
John wuxuu cadeeyay xiligaan sameynta Action-ka inaan loogu dhawaan karin si la mid ahna uu yahay xidig weyn oo fariin walbo 100% isku ekeysiin karo waana astaamaha lagu yaqaano atoorayaasha fanka u baahan yahay xiligaan inay la imaadaan.
Manoj Bajpayee wax walbo oo loo dhiibo waa qasab inuu qurxiyo markaana filimkan si adag ayuu John ula xifaaltamay waana sababaha ugu weyn filimkan loo daawan doono.
Atirishada fanka ku cusub Aisha Sharma qaab jiliin wacan ayay la timid weynka isku kalsoon tahay marka ay shaashada hortaagan tahay balse nasiib daro doorkeeda filimkan waa mid yar.
Gunaanad: SATYAMEVA JAYATE waa fariin adag oo Action, xarakaad, hadalo wacan iyo la dagaalanka musuqa dhanka booliska ka hadlaayo si wacan John ugu baxsaday. Waa qasab in daawadayaasha Single Screens-ka filimkan u sacao u tamaan sidoo kalena waa filim siweyn kaga gadmi doono dadka jecel aflaanta Action-ka ee mada daalada dhameestiran leh sidoo kalena la isku xifaaleeyo waana mashruuc guul wacan gaari doono.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka SATYAMEVA JAYATE iyo Action-mada John sameenayo:
Waxaa Aqrisay 1,345